ဝယ်ယူရေး/ကြေငြာများ | Community Driven Development Project | Page 2
၀ယ်ယူရေး/ကြေငြာများ	Vacancy for Township Technical Assistant KACHIN STATE
The Republic of the Union of Myanmar has received financing from the World Bank to implement the National Community Driven Development Project (NCDD) under the Department of Rural Development (DRD) of the Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation. The Government intends to apply part of the Grant proceeds to hire consulting services for new townships to be covered starting in ...	Read More »
လူထု စည်းရုံးရေးမှူးရာထူးနှင့် လက်ထောက် နည်းပညာမှူးရာထူးအတွက် အလုပ်ခေါ်စာ -ပဲခူးတိုင်း(မိုးညို ၊ ကျောက်ကြီး)-ရန်ကုန်(ကော့မှူး)
ပဲခူးတိုင်း၊ မိုးညို မြို့နယ်နှင့် ကျောက်ကြီးမြို့နယ်နှင့် ရန်ကုန်တိုင်း၊ ကော့မှူးမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးများတွင် တာဝန် ထမ်းေ်ဆာင်နိုင်ရန်အတွက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးရာထူးနှင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူးရာထူးအတွက် အလုပ်ခေါ်စာ။	Read More »
Translator (1) ဦးနှင့် secretaries (၂) ဦး အတွက် တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများ
Translator (1) ဦးနှင့် secretaries (၂) ဦး အတွက် လစ်လပ်လျက် ရှိသော တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများ အတွက် References များကို Download လုပ်ယူ လေ့လာနိုင်ပါသည်။	Read More »
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း လူထုစည်းရုံးရေးမှူးနှင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူး အလုပ်နေရာအတွက် အလုပ်လျှေက်လွှာခေါ်ယူခြင်း နှင့် မြို့နယ်များသို့ စုံစမ်းဆက်သွယ်ရမည့် လိပ်စာများ
အလုပ်ကြော်ငြာခြင်း (Training Assistant)
အလုပ်ကြော်ငြာခြင်း (Training Assistant)	Read More »
အလုပ်ခေါ်ယူခြင်း (ဘာသာပြန် ၂ ဦး)
Ministry of Livestock, Fisheries, and Rural Development Department of Rural Development (DRD) National Community Driven Development Project IDA Grant H814-MM Assignment Title: Two Translators/ Interpreters (24 Months) Reference No: C 26/2015 The Republic of the Union of Myanmar has received financing from the World Bank towards the cost of its NCDD Project; website: (http://cdd.drdmyanmar.org), which is being implemented by the ...	Read More »
ဈေးနှုန်းအဆိုပြုလွှာ ခေါ်ယူခြင်း (Office Furniture၊ Diesel Generator၊ Air Conditioner၊ Water Cooler၊ Plotter၊ Portable hard drive နှင့် UPS၊ Laptop Computer၊ ရိုးရိုးကင်မရာနှင့် ဗီဒီယိုကင်မရာများ)
Download here request for quotation (Office Furniture) Download here request for quotation (Generator) Download here request for quotation ((Air Conditioner) Download here request for quotation (Water Cooler) Download here request for quotation (Laptop Item-2) Download here request for quotation (Office equipments-4Items) Download here request for quotation (Camera) Download here request for quotation (Computer equipments) Read More »
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (National Community Driven Development Project) စီမံကိန်း လက်စွဲစာအုပ် ထုတ်ဝေခြင်းအတွက် ပြည်တွင်း လုပ်ငန်းရှင်များကို ဖိတ်ခေါ်ယူခြင်း
မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ၀န်ကြီးဌာန (ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (National Community Driven Development Project) စီမံကိန်း လက်စွဲစာအုပ် ထုတ်ဝေခြင်းအတွက် ပြည်တွင်း လုပ်ငန်းရှင်များကို ဖိတ်ခေါ်ယူခြင်း ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ ထောက်ပံ့ငွေဖြင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနမှ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသော လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အတွက် စီမံကိန်း လက်စွဲစာအုပ်များ ပရင့်ထုတ်ခြင်းနှင့် စာအုပ်ချုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းများ အတွက် အိတ်ပိတ်တင်ဒါ တင်သွင်းနုိုင်ရန် ပြည်တွင်း လုပ်ငန်း ရှင်များအား ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်- စဉ် အကြောင်းအရာ အရေအတွက် ပေးပို့ရမည့် နေရာ ၁ စာမျက်နှာ (၂၅၀)ပါ စီမံကိန်း လက်စွဲစာအုပ် အတွဲ(၁) ထုတ်ဝေခြင်း (မြန်မာဘာသာ)၊ ကျောကပ်။ ၈၀၀၀၀ အုပ် ရန်ကုန် (၂၀၀၀၀ အုပ်)၊ မန္တလေး (၂၀၀၀၀အုပ်)၊ ...	Read More »
International Competitive Bidding for MOTORCYCLES 105cc (LOW CLEARANCE)
SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE (PROCUREMENT OF GOODS / WORKS) REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR NATIONAL COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT PROJECT- NCDDP Loan No./Credit No./ Grant No.:H-814MM Contract Title: MOTORCYCLES 105cc (LOW CLEARANCE) Reference No. : ICB G 17 (a) The Republic of the Union of Myanmar has received financing from the International Development Association (IDA) toward the cost of the ...	Read More »
International Competitive Bidding for TABLETS with power bank and high protection carry case
SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE (PROCUREMENT OF GOODS / WORKS) REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR NCDDP – NATIONAL COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT PROJECT Loan No./Credit No./ Grant No.:H-814MM Contract Title: TABLETS with power bank and high protection carry case Reference No. : ICB G 22 The Republic of the Union of Myanmar }7xW=?O]י
srnational Development Association (IDA) toward the cost of the National ...	Read More »
Page2of 4«1234	»	Project Overview